महाकविको जीवन्त कथा « LiveMandu
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार २१:२२
वरिष्ठ साहित्यकार नरेन्द्रराज प्रसाईले लेख्नुभएको ‘देवकोटाको जीवनशैली’ मेरो हातमा पर्यो । यो कृति पढ्दै जाँदा देवकोटाका चिकित्सक डा. बर्कले हिलले भनेको प्रसङ्गमा मेरा आँखा टक्क अडिए । उनले भनेका रहेछन्- देवकोटा नेपालमा जन्मिनु ‘जोग्राफिकल मिस्टेक’ अर्थात् भौगोलिक त्रुटि हो । उनी अरू देशमा जन्मेका भए कति ठूला हुन्थे; मानौँ उनी नोवेल प्राइज पाउनेहरूभन्दा ठूला हुन्थे । देवकोटा गरिव होइन रहेछन् । उनलाई तन र धनको रोग नभएर मनको रोग लागेको रहेछ- पुस्तक पढ्दै जाँदा साच्चै मलाई पनि डा. हिलको कुरामा सहमत हुन मन लाग्यो ।
१९६६ साल तिर कुलीन ब्रामणको घरमा जन्मिएका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शिक्षादीक्षामा पनि कुनै कमी भएको देखिएन । आफ्नो इच्छालाई पन्छाएर बाबु तिलमाधव देवकोटाले छोराको इच्छा बमोजिम नै अङ्ग्रेजी शिक्षा हाँसिल गराएका रहेछन् ।
लेखकः इन्दिरा दीक्षित
देवकोटाले पैसा नकमाएका पनि होइनन् । त्यो जमानामा जागिरेहरु को कमाइ जम्माजम्मी ४०/५० रुपैंया जति हुन्थ्यो र पनि मजाले घर चलेकै हुन्थ्यो भने म्याट्रिक पास गरेदेखि नै उनी ट्युसन पढाउँथे, कैलेकाही त दिनको १८‌ घण्टासम्म ट्युसन पढाउँथे तर पनि कसरी आर्थिक अभाव भयो होला ?
देवकोटा पढाइमा तेज भएकाले नौ वर्ष लाग्ने नेपालको पढाई पाँच वर्षमै सकेर भारतबाट हुने ऐलेको एस एल सी जस्तै उनले म्यट्रिकुलेसन प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका थिए । उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएसी पास गरे भने त्यसपछि प्राइभेट परिक्षार्थिको रुपमा पटना विश्वविद्यालयबाट बीए पास गरेका थिए । त्यसपछिको उनको पढाई राणा सरकारको छात्रवृत्ति मार्फत भारतमै भएको थियो । उनले पटना विश्वविद्यालयबाट बीएल उतिर्ण गरे । त्यसै बेला नेपालमा महाभूकम्प गयो । १९९०सालको माहाभूकम्पले दुनियाँको घरसन्सारसँगै उनको एमए पढ्ने आकाङ्क्षा माथि पनि तुषारापात भयो । त्यसपछि पढाइलाई स्थगित गरेर उनी जागिरतिर भौतारिन थाले । उनले प्रोफेसरको जागिर पाए । बीए पास भएर प्रोफेसर हुने प्रथम नेपाली उनै थिए ।
पुस्तक पढ्दैजादा आफ्नो जीवनकाल भरिका धेरै समय देवकोटाले अनेक प्रकारका दु:ख पाएको देखिन्छ । कहिले घरबाट, कहिले समाजबाट, कहिले शरीरबाट र कहिले सरकारबाट उनले दु:ख खेपिरहे । यस्ता अनेक कटुसत्य र आश्चर्यजनक कथनहरू नरेन्द्रराज प्रसाईले ‘देवकोटाको जीवनशैली’ पुस्तक मार्फत उघार्नु भएको छ ।
अग्लो र छरितो सरिर माथि दौरासुरुवाल कोटमा सजिएर सिरमाथि टोपी लगाएर हिँड्दा सुन्दर र भब्य देखिने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । उनको स्वरुप अनि त्यति बेलाको नेपालमा रहेका उनका समकालीन नेपालीभन्दा शिक्षित र जान्ने व्यक्तित्वका धनी भएर पनि आफ्नो अव्यवहारिक कारणले गर्दा उनी अपहेलित पनि भइरहे । उनी त माहान् कवि थिए । बाल्यकाल देखि नै असाधारण कविता लेखेर उनले विलक्षण प्रतिभा देखाउदै आएका थिए । युवा अवस्थामा पुग्दानपुग्दै विभिन्न किसिमका लेखहरु लेखेर सबै सामु आफ्नो छवि उच्च वनाई सकेका थिए, समकक्षी बिचमा अब्बल भएर पनि उनले किन आफ्नो अनुकूलको वातावरण पाएनन् होला ? मेरो मनमा मात्र हैन सबैको मनमा यही जिज्ञासा लाग्नु स्वभाविकै हो । सोच्दासोच्दै म निष्कर्षको नजिक पुगेँ कि देवकोटाले त्यतिबेलाको परिस्थिति अनुकूल आफूलाई ढाल्न नसक्नु नै उनको दु:खको मुख्य कारण हुन सक्छ । केही हदसम्म उनी आफै आफ्नो कमजोरीका कारण दुखको जिम्मेदार भएका हुन् जस्तो लाग्यो मलाई ।
देवकोटाले पैसा नकमाएका पनि होइनन् । त्यो जमानामा जागिरेहरु को कमाइ जम्माजम्मी ४०/५० रुपैंया जति हुन्थ्यो र पनि मजाले घर चलेकै हुन्थ्यो भने म्याट्रिक पास गरेदेखि नै उनी ट्युसन पढाउँथे, कैलेकाही त दिनको १८‌ घण्टासम्म ट्युसन पढाउँथे तर पनि कसरी आर्थिक अभाव भयो होला ? भारतबाट बिएबिएल गरेर आएपछिको केही वर्षमा नै उनले भाषानुवाद परिसरमा मासिक ७० रूपैयाँ पाउँथे । यतिले त उनको घरमा मनग्गे पुग्नुपर्ने हो । उतिमाथि उनी त्रिचन्द्र कलेजमा प्रोफेसर पनि थिए । त्यहाँबाट पनि उनले १०० रूपैयँ पाउँथे । एक महिनामा यत्तिको रकम हातपर्दा त छेलोखेलो हुनुपर्ने हो । तर पनि कसरी नपुग्ने होला ?
एकोहोरो बानी र झट्टै अरुको कुरा पत्याई हाल्ने स्वभावले गर्दा पनि यिनले धेरै दु:ख पाएको देखिन्छ । कसैको दु:ख देख्न नसक्ने दयालु स्वभावले गर्दा आफ्ना जायजेथा पनि जो माग्छ आउँछ उसैलाई दिदै गए, फलस्वरुप देवकोटाका जग्गाजमिन पाएका आफन्तहरु धनी बने भने उनी चाहिँ गरिव वन्दै गए ।
मेरो विचारमा वुँधागत रुपमा भन्नुपर्दा उनको दुखको कारणहरु यसप्रकार देखिन्छन् :
१. महत्वाकाङ्क्षी स्वभावका देवकोटाको पहिलो दु:खको कारण महत्वाकाङ्क्षानै बन्यो । खुबै धनी बन्ने सपना सँगाल्दै गहिरा कुरामा तल्लिन हुन्थे र आफ्नो देश विकाश गर्नका लागि नयाँ योजनाको तर्जुमा गर्थे । तर उतिबेलाको सरकारले उनको कुरामा ध्यान दिएन; फलस्वरुप उनको विद्धता र योजना सबै खुम्चिएर रहे ।
३. जीवन कसरी चलाउँने भन्ने ज्ञान नभए जस्ता, जस्ले जे भन्यो त्यही पत्याएर उसैका पछि लागि हाल्ने बालसुलभ स्वभावका धनी थिए देवकोटा । उनी आफ्ना आश्रितमा रहेका परिवारलाई समेत भुलेर महिनौ मात्र नभएर बर्षौ पनि हराउँने गर्थे । सरल हृदयका धनी उनले अरुको जाल झेल र कपट कहिले बुझेनन्, उनलाई अघि लाएर आफ्नो दुनु सोझ्याउँने जमातलाई चिन्दै चिनेनन्, बिरामीले थल्लिएको अवस्थामा बिरानो मुलुकमा झिङ्गाले छोडेझै उनका विश्वसपात्रले छोडेर पाखा लागे । मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुगेपछि विश्वासको परिणाम बुझ्दैगए र उनीमा संसारदेखि निराशा पनि बढ्दै गयो ।
४. देवकोटाको स्वादे जिब्रोका कारण पनि उनको जीवन अस्तब्यस्त भएको देखिन्छ । हातमा पैसा होस् या नहोस् उनलाई मासु अति खानु पर्दोरहेछ । सिङ्गै खसीको टाउको एकै पटकमा खाइदिन सक्ने उनी सधैँ टन्न मासु खान खोज्दा रहेछन् । घरमा मासु नपाए पसलमा गएर मासु चिउरा उधारै भएपनि टन्न खाने, आफूले मात्रै नभएर दलबल सहित लगेर ख्वाउनपर्ने ।
देवकोटालाई कुन पसलमा कति खाएँ भन्ने कुराको लेखाजोखा नै हुदैनथ्यो । आफू इमानदार भएकाले तलव आएको दिन उधारो खाएको पसलतिर तिर्दै हिड्थे र ऋण खाएका पसलेलाई पैसा तिर्न जाँदा उनीहरूले आफूखुसी बढाएर पैसा असुल्थे । साथै नखाएका ठाउँमा पनि उनले पैसा तिर्दै हिड्थे । यसरी जथाभावी पैसा दिदैजादाँ उनी रित्तो हात घर पुगेका हुन्थे । आफूले खाएको पैसा इमान्दार भएर तिर्दैजादा यो पनि बिर्सन्थे कि आफ्नो आश्रितता रहेको परिवारको दैनिकी रित्तो हातले कसरी चल्ला ?
५. एकोहोरो बानी र झट्टै अरुको कुरा पत्याई हाल्ने स्वभावले गर्दा पनि यिनले धेरै दु:ख पाएको देखिन्छ । कसैको दु:ख देख्न नसक्ने दयालु स्वभावले गर्दा आफ्ना जायजेथा पनि जो माग्छ आउँछ उसैलाई दिदै गए, फलस्वरुप देवकोटाका जग्गाजमिन पाएका आफन्तहरु धनी बने भने उनी चाहिँ गरिव वन्दै गए । उनी कतिसम्म दानी रहेछन् भने जागिरबाट तलब पाएको दिन कोही हात पसारेर अगाडि उभियो भने खल्तीको सबै पैसा उसैलाई दिएर रित्तो हात घर फर्कन्थे । कसैलाई दिन पाउँदा उनले आफ्नो घरलाई चटक्कै बिर्सिदा रहेछन् ।
देवकोटा साच्चै असाथारण प्रतिभाका धनी थिए । उनको जीवनी पढ्दै जाँदा त्यो समय अनि नेपालभित्र जन्मनु नै उनको अभाग थियो । उतिबेलाको समाजले उनलाई आफ्नै तरिकाले हेर्थ्यो अनि आफै बिश्लेषण गर्थ्यो । देवकोटाले हात हल्लाउँदै अंग्रेजीमा वेद पाठ गरेको सुन्दा उनको गिल्ला गरेर हाँसोमा उडाउने हाम्रो समाजले उनको कदर कैल्यै गरेन । उनको कुरालाई सही ढँगले नबुझ्दा उनी पागलको स्थानमा पनि पुगे । उतिबेलाको समाजमा आफ्ना कुरा बुझाउँन उनले निक्कै सँघर्ष गरे तर सकेनन्, नेपाली समाजले उनलाई बुझ्दा बुझ्दै उनको ज्यान गयो ।
एउटा कुरा मैले खुट्याउँन सकिन, देवकोटा नेपालमा जन्मनु उनको अभाग थियो अथवा उनलाई वुझ्न नसक्नु नेपालीको अभाग हो ! मेरो दिमागमा अझै एउटा अनुत्तरित प्रश्न डौडिरहन्छ । आजको नेपालले फेरि अर्को देवकोटा पाउन सक्ला त ? नरेन्द्रराज प्रसाईको ‘देवकोटाको जीवनशैली’ पढेपछि मेरो मनमा अनेक तरङ्गहरू उब्जिरहेका छन् ।
[email protected], livemandu1[email protected]